Basaska Qaada Dadweynaha Ee Xaafadaha Hargeysa Oo Shaqo Joojin Sameeyey | Himilo Media Group
Basaska Qaada Dadweynaha Ee Xaafadaha Hargeysa Oo Shaqo Joojin Sameeyey
Hargeysa, (Himilo)-Gaadiidka u kala goosha xaafadaha kala duwan ee Caasimada Hargeysa ee loo yaqaano Basaska ayaa guud ahaan joojiyey shaqooyinkii ay dadweynaha u fidinayeen, ka dib markii ay ka cawdeen gaadiidka yaryar ee Tagaasidda yaryar oo saameyn ku yeeshay shaqadoodii amase cidhiidhi galiyey.
Guddida Basaska ayaa sheegay in ciidanka amnigu wax ka qaban waayeen amar ka soo baxay dawladda hoose ee Hargeysa oo lagu kala xadaynayo gaadiidka yaryar iyo Basaska, ka dibna ay ka baqeen inay isku dhacaan labada nooc ee gaadiidleyda ahi, taasina ay keentay inay iyagu door bideen inay shaqooyinkii ay dadweynaha u hayeen joojiyaan inta wax laga qabanayo.
Gaadiidka waaweyn ee Basaska ayaa inta badan u kala goosha magaaladda dhexdoodda, haseyeeshee gaadiidkii yaryaraa ee Tagaasida ayaa ugu yimid dadkii ay qaadi jireen Basaska, taasina waxay keentay inuu dagaal dhex maro gaadiidka yaryar iyo Basaska, ka dibna waxay isla qaateen Basasku inay joojiyaan shaqooyinkii ay dadka u hayeen.
Guddoomiyaha Basasleyda Cabdikariim Axmed Yuusuf ayaa sheegay in markii wax laga qaban waayey, isla markaana ay ka baqdeen inay gacmaha iskula tagaan ay la noqotay inay joojiyaan Basaska.
Dadweynihii macmiisha u ahaa basaska ayaa waayey waxay raacaan, waxaaana jaaniska ay banneeyeen ka faa’iiday takaasidii yaryaraa oo dadkii guraya.